Nhau - Mhuka dzezvipuka zvinodhaka uye kushandiswa kwavo
Mhuka dzezvipuka zvinodhaka uye kushandiswa kwavo
Kuchengetedza uye Kuendesa kweBio-mishonga
(1) Majekiseni anogona kubatwa nechiedza uye kudziya uye nekukurumidza anoderedza kushanda kwawo, saka anofanirwa kuchengetwa mumafiriji pa2 kusvika 5 ° C. Kukundikana kumisikidza majekiseni akadai sekuomesa nechando kunokanganisa kushanda, saka firiji haigone kutonhodzwa, zvichikonzera kuti mushonga utonhorere uye utadze.
(2) Kana jekiseni raunzwa, rinofanira kuramba richichengetwa munzvimbo ine firiji, kutakurwa nerori rine firiji, uye kupfupisa nguva yekuendesa zvakanyanya. Mushure mekusvika kwairi kuenda, inofanirwa kuiswa mufiriji ye4 ° C. Kana pasina rori yemufiriji inogona kutakurwa, inofanirawo kutakurwa uchishandisa chando chepurasitiki popsicle (mvura inodzivirira) kana chando chakaoma (mushonga wakaoma).
(3) Majekiseni anodzivirira sero, senge jekiseni remvura yeTurkey-herpesvirus yeMarek jekiseni, inofanirwa kuchengetwa mune nitrogen yemvura pamusi wa 195 ° C. Munguva yekuchengetedza nguva, tarisa kana iyo senitrogen yemvura iri mumudziyo iri kuzonyangarika vhiki rega rega. Kana iri kuda kunyangarika, inofanirwa kuwedzerwa.
(4) Kunyangwe kana nyika ichibvumidza jekiseni rakakodzera, kana risina kuchengetedzwa zvisina kufanira, kutakurwa uye kushandiswa, zvinokanganisa mhando yemushonga uye kuderedza kushanda kwawo.
Chechipiri, kushandiswa kwemajekiseni kunofanirwa kutarisisa zvinhu
(1) Chekutanga pane zvese, inofanirwa kuverenga rairo dzinoshandiswa nefekitori yemishonga, uye zvinoenderana nekushandisa kwayo uye chipimo chemushonga.
(2) Tarisa uone kana bhodhoro rejekiseni rine chitupa chekutarisa uye kuti inopfuura nguva yekupera. Kana yapfuura nguva yekupera kwekudzivirira, haigone kushandiswa.
(3) Mushonga unofanirwa kudzivirira zvachose kujekerwa nezuva.
(4) Iyo sirinji inofanira kufashaidzwa kana kupfungairwa moto uye haifanire kuiswa mishonga inouraya utachiona (doro, stearic acid, nezvimwewo).
(5) Mushonga wakaoma mushure mekuwedzeredzwa mhinduro yakasanganiswa inofanira kushandiswa nekukurumidza uye inofanira kushandiswa mukati memaawa makumi maviri nemana panguva dzekupedzisira.
(6) Mishonga yokudzivirira inofanira kushandiswa mumapoka ane hutano. Kubaya nhomba kunofanira kumbomiswa kana paine kushomeka kwesimba, kurasikirwa nechido, fivha, manyoka, kana zvimwe zviratidzo. Zvikasadaro, kwete chete haigone kuwana hutachiona hwakanaka, uye ichawedzera mamiriro ayo.
(7) Inactivated jekiseni Mazhinji maadjuvants anowedzerwa, kunyanya mafuta ari nyore kutapudza. Nguva imwe neimwe apo jekiseni raiburitswa musipiringi, bhodhoro rekudzivirira raizunzwa zvine simba uye zvemukati wemushonga wacho waive wakagadziriswa zvachose usati washandiswa.
(8) Dzivirira majekiseni emabhodhoro asina chinhu uye majekiseni ekudzivirira asina kushandiswa anofanira kuiswa utachiona uye kuraswa.
(9) Nyora zvakadzama mhando yemushonga wekudzivirira wakashandiswa, zita rezita, nhamba yebatch, zuva rekupera, zuva rejekiseni, uye mhinduro yejekiseni, uye uichengetedze kuitira ramangwana.
Chechitatu, yehuku yekunwa mvura jekiseni jekiseni inofanirwa kutarisisa kune zvinhu
(1) matsime ekunwa anofanira kunge ari mvura yakachena isina mushonga wekuuraya utachiona mushure mekushandisa.
(2) Mishonga yekudzivirira yakasanganiswa haifanire kugadzirwa nemvura ine utachiona kana mvura ine acidic kana alkaline. Mvura yakasvibiswa inofanira kushandiswa. Kana uchifanira kushandisa pombi yemvura, wedzera nezve 0.01 gramu eHypo (Sodium thiosulfate) kusvika pa1,000 ml yemvura yemupombi mushure mekubvisa mvura yemupombi kuti utachiona hwemvura yepombi, kana kuushandisa kwehusiku humwe.
(3) Mvura yekunwa inofanirwa kumbomiswa pamberi pekumwaya, ingangoita 1 awa muzhizha uye ingangoita maawa maviri muchando. Muchirimo, tembiricha yemwenje chena yakati rebei. Kuti kuderedze kurasikirwa kwehutachiona hutachiwana, zvinokurudzirwa kuita inoculation yemvura yekunwa kana tembiricha yakadzika mangwanani-ngwanani.
(4) Huwandu hwemvura yekunwa mujekiseni rakagadzirwa raive mukati maawa maviri. Huwandu hwemvura yekunwa paapuro pazuva hwaive seinotevera: mazuva mana ezera 3 ˉ 5 ml mavhiki mana ezera 30 ml 4 mwedzi yemakore 50 ml
(5) Kunwa mvura pa1,000 ml Wedzerai 2-4 magiramu emukaka wakakoshwa kuti udzivirire mushonga wekurwisa hutachiona.
(6) Matsime ekunwa akakwana anofanira kugadzirirwa. Dzinenge 2/3 huku dziri muboka rehuku dzinogona kunwa mvura panguva imwe chete uye panguva dzakatarwa uye madaro.
(7) Mvura yekunwa mishonga inouraya utachiona haifanirwe kuwedzerwa kumvura yekunwa mukati memaawa makumi maviri nemana mushure mekupihwa kwemvura yekunwa. Nekuda kwekukanganisa kuwanda kweutachiona hutachiona muhuku.
(8) Maitiro aya akareruka uye anochengetedza vashandi pane jekiseni kana kudonhedza maziso, mhino-mhino, asi kugadzirwa kusina kuenzana kwemasoja ekudzivirira chirwere ndiko kukanganisa.
Tafura 1 Dilution yekunwa mvura yemvura yekunwa Zera zera mazuva mana mazuva gumi nemana makumi maviri nemasere ekuberekwa kwemwedzi makumi maviri neshanu Dissolve chiuru chemvura yekunwa 5 litita 10 litita 20 litita 40 litita Cherechedzo: Inogona kuwedzerwa kana kuderedzwa zvinoenderana nemwaka. Chechina, huku yekumwaya inoculation inofanirwa kutarisisa zvinhu
(1) pfapfaidzo inoculation inofanirwa kusarudzwa kubva kune yakachena huku yekupurazi ndeyekuitwa kweiyo hutano huku yeapuro, nekuda kweiyi nzira kana ichienzaniswa neziso, mhino uye nzira dzekumwa, kune yakakomba yekufema incursions, Kana uchirwara neCRD ichaita iyo CRD yakaipa. Mushure mekupfira inoculation, inofanirwa kuchengetwa pasi pehutarisiro hwakanaka hwehutsanana.
(2) Nguruve dzakabayiwa nekusaswa dzinofanira kunge dziine masvondo mana kana kupfuura uye dzinofanira kutanga kupihwa nemunhu akabayiwa nhomba yekurarama isingashande.
(3) Zvipenga zvinofanirwa kuiswa mufiriji 1 zuva usati wabaya. Pamamwe mahwendefa chiuru ekudzora akashandiswa mumakeji e30 ml uye mafirita anodyisa e60 ml.
(4) Kana pfapfaidzo yaiswa jekiseni, mahwindo, mafeni anofefetedza, uye maburi emhepo inofanirwa kuvharwa uye kona imwe yeimba inofanirwa kusvikwa. Zviri nani kuvhara jira repurasitiki.
(5) Vashandi vanofanirwa kupfeka mamask uye magirazi asingatendeswe nemhepo.
(6) Kuti tidzivirire hosha yekufema, maantibayotiki anokwanisa kushandiswa kusati kwapera uye mushure mekumwaya.
Chechishanu, kushandiswa kwehuku mukushandisa majekiseni
(1) Newtown huku zvihuta majekiseni anokwanisa kuganhurwa kuva mhenyu mishonga yekudzivirira uye isina kumutswa majekiseni.